Faah Faahin: Militeriga Kenya oo sheegay in ay xoog kusoo furteen Shaqaalihii laga afduubtay IFO2
Faah Faahin: Militeriga Kenya oo sheegay in ay xoog kusoo furteen Shaqaalihii laga afduubtay IFO2 Posted by By Dalweyn Media at 2 July, at 14 : 32 PM Print Dheeraad ah ayaa kasoo baxaya weerar lagu soo bad baadiyay shaqaalo ajaanib ah kuwaa soo kooxo hubaysan ay labo maalin kahor ka afduubteen xerada IFO2 ee gobolka Waqooyi Bari Kenya.
Ciidamada Militeriga Kenya iyo kuwa dowlada Soomaaliya ee kusugan gudaha gobolka Jubada Hoose ayaa ku biiray howlgalka lagu soo bad baadinayo shaqaalahan oo la rumaysan yahay in ay Shabaab afduubteen.
Ciidamada isgarabsanaya ayaa ku guulaystay in ay soo bad baadiyaan kooxdan shaqaalaha ah iyadoo dagaal dhexmaray afduubayaashii iyo ciidamada lagu dilay mid kamid ah kooxdii afduubka uhaystay shaqaalaha, waxaana weerarkaas uu ka dhacay xalay deegaanka Alibule oo qiyaastii 70km ujirta magaaladda Afmadow.
“waxaa ay ku bad baaden gacmaheena waana xor hadda,” ayuu sheegay Afhayeenka Militeriga Kenya Cyrus Oguna.
waa lasii daayay kadib howlgal ay nagala qeyb qaateen Militeriga Soomaaliya iyo ciidamada Kenya ee kusugan Soomaaliya, intii uu howlgalka socdayna hal ayaan ka dilnay kooxdii afduubayaasha ahaa.” ayuu hadalkiisa raaciyay Sargaalkan
Afarta shaqaalaha ah oo katirsanaa hay’ada Norwegian Refugee Council (NRC), ayaa ukala dhashay dalalka Canada, Norway, Pakistan iyo Philippines.
Waxaa lasoo sheegayaa in mid kamid ah shaqaalaha dhaawaca uu soo gaaray kadib markii ay xabad ku dhacday
Cyrus Aguna ayaa sheegay in ay mudo badan la lugaynayeen shaqaalahan ayna mid kamid ah lugta rasaas kaga dhufteen
Shaqaalaha ayaa hada kusugan degmada Dhoobley ee gobolka Jubada Hoose oo ka agdhow xaduuda kenya
“Hada waxaa ay marayaan baaritaano caafimaad isbitaal kuyaal xarun aan ku leenahay Dhoobley waxaana loo soo gudbin doonaa Kenya,” ayuu sheegay Oguna.
Mohamed Dini Adan oo katirsan taliska ciidamada xooga dalka ee Dhoobley kusugan ayaa sheegay in ciidamadooda ay istaajiyeen kooxdii afduubka soo qaaday.
“Ciidamada ayaa istaajiyay kooxda afduubayaasha ah iyagoo doonaya in ay ciidamada ka qariyaan dadka ay afduub ahaanta uhaystaan.” ayuu sheegay Sargaalkan.
Waxaa uu xaqiijiyay in shaqaalihii laga afduubtay Dhadhaab hada ay yihiin kuwa caafimaad qaba oo lasoo bad baadiyay.
Diyaaradaha Militeriga ee helicopters-ka iyo ciidamada Booliska ayaa ka qeyb qaadanayay soo bad baadinta shaqaalahan la afduubtay iyagoo xili hore gacanta kusoo dhigay gaarigii lagu soo afduubtay.
Militeriga Kenya waxaa ay tilmaameen in ay gacanta ku hayaan kooxdii falka afduubka ah ka gaystay xerada Dhadhaab.